Nikaragoà: Maneho Hevitra Momba Ny Fampandrosoana Ambanivohitra Amin’ny Alàlan’ny Lahatsary Ny tantsaha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2018 5:02 GMT
(Marihina fa tamin'ny 17 Novambra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Voa avy amin'i theogeo
Misy fikambanana miisa enina ao Matagalpa, Nikaragoa izay miasa amin'ity tetikasa ity, anisan'izany ny fikambanan'ny vehivavy , ny Fikambanana Matagalpa ho an'ny jamba, ny fikambanan'ny tantsaha sy ny Foibe Fampahalalam-baovao ho Fampandrosoana Maharitra miaraka amin'ny fanampian'ny Simas. Anisan'ny tetikasa iray hanehoana ny asa ataon'ireo fikambanana ireo miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay miresaka momba ny fiainany, ny ahiahiny ary ny fahalianany ny tranonkala.
Ato anatin'ity horonantsary manaraka ity , nanazava ny fomba nanampian'ny fandaharan'asa azy ireo i Marcial Gonzalez, mpandrindra ny fandaharan'asan'ny Tantsaha ho an'ny Tantsaha. Voalohany, nianaratra ny antony tsy tokony handoroana ny taniny rehefa manadio izany izy ireo sy ny fomba hananganana na hanamboarana tatatra sy sakana ho fanampiana amin'ny famehezana ny tany tsy ho koaka. Ny maha-zava-dehibe ny manangona sy mitahiry ny masomboly avy amin'ny voly nasionaly isan-karazany ny lesona iray hafa nianaran'izy ireo, satria tena mety tsara ny fambolena izany ao anatin'ny tontolo iainan'izy ireo sy ny antony tokony tsy hanapahana ny hazo, satria manome oksizena, alokaloka ary mihazona ny loharano izany.
Nanazava ny dikan'ny hoe mpanohana ny vondrom-piarahamonina i Juana Urrutia, ao amin'ny horonantsary iray hafa. Miandraikitra ny vondrona na ny vondrom-piarahamonina ny mpanohana sady miaro ny tombotsoan'ny vondrom-piarahamonina, na any amin'ny sehatra hiasana, na ny famokarana na ara-tsosialy. Mampita fahalalana izay azony nandritra ny atrikasa na ny hetsika ihany koa izy ireo satria ny hampihatra izay nianaran'izy ireo tao anatin'ny vondrom-piarahamoniny no andraikiny.
Misitraka fampisamboram-bola sy fandaharan'asa mba hanampiana ny vehivavy hanomboka ny orinasany manokana i Martha Elena Montenegro. Namoaka vokatra vitsivitsy izy tamin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana hanotazany eny amin'ny toeram-pamboleny, na izany aza, tsy maintsy nandoa ny vola nindraminy izy taorian'ny ezaka rehetra nataony ary nampiasainy ny lahatsary fampitam-baovao mba hanontaniana ny fomba tokony hizarany amin'ny fomba tsara indrindra ny vola azony mba hahafahany mandoa ny trosany.
9 ora izayVenezoela